ပိုလန်နိုင်ငံအစိုးရ သည် COVID-19 စတုတ္ထလှိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတိပေး - Xinhua News Agency
ပိုလန်နိုင်ငံ၊ ဝါဆောမြို့လယ်ရှိ ဘားတစ်ခု၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ ၁၅ ရက်က လူများကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဝါဆော၊ ဇွန် ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ကာကွယ်ဆေးထိုးနှုန်းမြင့်တက်နေသော်လည်း COVID-19 စတုတ္ထလှိုင်းဖြစ်နိုင်ချေရှိကြောင်း ပိုလန်နိုင်ငံအစိုးရက ဇွန် ၁၅ ရက်တွင် တရားဝင်သတိပေးခဲ့သည်။ဗီဇပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကပ်ရောဂါလှိုက်းအသစ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိကြောင်း၊ သို့သော် ပိုလန်နိုင်ငံပြည်သူများအနေဖြင့် အဖွဲ့လိုက်ကိုယ်ခံအားကောင်းမွန်ရန်နီးကပ်လာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ပိုလန်မီဒီယာများနှင့် သီးခြားတွေ့ဆုံမေးမြန်းသည့်အချိန်တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Niedzielski နှင့် အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Piotr Muller တို့နှစ်ဦးစလုံးက ပြောကြားခဲ့သည်။
လှိုင်းအသစ်ဖြစ်နိုင်ချေအလွန်မမြင့်မားသော်လည်း ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်နောက်ဆုံး ဖြစ်နိုင်ချေကူးစက်မှုအသစ် အတွက်ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်း ပိုလန်ရေဒီယိုတွင် Niedzielski ကပြောကြားခဲ့သည်။ “ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ထောက်ပို့စီမံမှုတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်’’ ဟု၎င်းကဆိုသည်။
COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုအသစ်များမြင့်တက်လာပါက ဆေးရုံများ အသင့်ပြင်ဆင်ထားခြင်းနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်၏ ပြောင်းလဲမှုအသစ်များအား မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ဓာတ်ခွဲခန်းများပြင်ဆင်ခြင်းတို့အားဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံ၏ လက်ရှိကာကွယ်ဆေးအရေအတွက်သည် ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့် ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်အတွက် ကာကွယ်ရန် လုံလောက်မှုမရှိသေးကြောင်း ယင်းနေ့တွင်ပင်ပြုလုပ်သည့် Polsat တီဗွီနှင့် အင်တာဗျူးတွင် Muller ကပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ဇွန်လအတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကူးစက်မှုကိန်းဂဏန်းများမှာ မူလခန့်မှန်းချက်ထက်ပိုမိုမြင့်မားလျက်ရှိသေးကြောင်း ၎င်းကဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံအတွင်း၌လူဦးရေ ၃၈ သန်းမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ရောဂါခုခံနိုင်စွမ်း (herd immunity) ရရှိရန်နီးစပ်လာပြီဖြစ်ကြောင်း ၊ လူများအနေဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုအားကာကွယ်ရန် လုံလောက်သောကိုယ်ခံအားရှိပြီဖြစ်ကြောင်း Niedzielski က ဆိုသည်။ ပိုလန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာမှ ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များအရ အနည်းဆုံး ကာကွယ်ဆေးကြိမ်ရေ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေး ကြိမ်ရေပေါင်း ၂၄.၄ သန်း ထိုးနှံထားပြီး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၉.၇ သန်း မှ ဆေးနှစ်ကြိမ်စလုံး အပြည့်အဝ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။ (Xinhua)
Polish gov’t warns 4th wave of COVID-19
WARSAW, June 15 (Xinhua) — Polish government officials warned on Tuesday thatafourth COVID-19 wave is still possible despiteagrowing vaccination rate.
Giving separate interviews to Polish media, both health minister Adam Niedzielski and government spokesperson Piotr Muller said that new mutations might causeanew wave of the pandemic, despite that Polish society has come close to herd immunity.
Niedzielski told the Polish Radio that the ministry is preparing for the eventuality ofanew outbreak in the fall, although the likelihood of that is not very high. “However, we need to prepare logistically,” he said.
The preparation measures would include reserving hospital capacity in case ofanew COVID-19 surge, and preparing labs to test as many different genomes of the coronavirus as fast as possible to identify new mutations.
Muller said in an interview with Polsat TV on the same day that the country’s vaccination numbers are not high enough to prevent the spread of new mutation that would be more resistant to current vaccines, “but the numbers for June are still higher than we estimated earlier,” he added.
Niedzielski said that the country of 38 million population is nearing herd immunity, which means that enough people are immune to the virus to prevent spreading. Data from the health ministry shows that Poland has administered at least 24.4 million doses of COVID-19 vaccines, and 9.7 million Poles have been fully vaccinated. Enditem